Muslimiinta Sweden waa in ay la xisaabtamaan xisbiga Socialdemokraterna (S) | Somaliska
Xisbiga Socialdemokraterna (S) oo ah xisbiga taageerada ugu balaaran ka hela Muslimiinta ku nool Sweden ayaa isbuucii la soo dhaafay muujiyay wajigooda labaad. Fadeexada ku saabsan gudoomiye ururka Islaamka (Islamska Förbundet) Omar Mustafa ma ahan mid ku kooban isaga keliya balse waa mid ka dhan ah Islaamka iyo Muslimiinta Sweden.
In Omar Mustafa 7 maalmood gudahood looga saaro golaha sare ee xisbiga ma ahan mid ku timid dhalanteed balse waa mid qorsheysan oo la doonayo in Islaamka iyo shaqsiyaadka Muslimiinta ah ee firfircoon laga been abuurto si aysan horumar uga gaarin siyaasada Sweden.
Aflagaadada iyo hadalada kuracan ee ay ku hadleen qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan Xisbiga Socialka iyo hogaamiyaashooda sare ayaa muujinaysa in ay sawir qaldan ka haystaan diinta Islaamka isla markaana ay dhoola cadeyn been abuur ah u muujinayaan Muslimiinta si ay codkooda ku helaan. Oraahyada ka soo yeeray hogaanka sare ee xisbiga ayaa ah kuwo lagu yaqaanay xisbiga cunsuriga ah sida SD.
Eedeymaha loo soo jeediyay Omar Mustafa ayaa ah kuwo aan ku saabsanayn shaqsiyadiisa balse ku saabsan diinta Islaamka iyo aragtida Muslimiinta ee ku aadan dumarka iyo tusaale ahaan khaniisiinta. Ma ahan mid qarsoon ama wax cusub in Muslimiintu ay u arkaan khaniisnimada mid ka soo horjeeda amarka Allah. Ma ahan mid cusub in Muslimiintu aysan la dhacsanayn xasuuqa iyo cunaqabataynta ay Israel ku hayso Falastiiniyiinta. Mana ahan mid cusub ama qarsoon in Islaamku uu ragga iyo dumarka u sameeeyay door shaqo oo kala duwan.
In hogaanka sare ee xisbiga Socialdemokraterna ay arimahaas ka dhigaan kuwo laga argagaxo ama wax cusub ayaa ah mid layaab leh, waa mid kicinaysa been abuurka lagu hayo Islaamka iyo Islaam naceybka ka jira Sweden. Hogaanka xisbiga S ayaa muujiyay in aysan waxba ka duwanayn xisbiga SD. Hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga S ee ahaa in uu Omar Mustafe Kala doorto xubinimada xisbiga ama Gudoomiye nimada ururka Islaamka ayaa ah mid fariin culus u diraysa Muslimiinta ka tirsan xisbiga S oo loogu baaqayo in ay kala doortaan diintooda iyo xisbiga.
Muslimiinta Sweden qaasatan Soomaalida oo ah kuwo inta badan u codeeya xibsiga Socialdemokraterna (S) waxaa la gudboon in ay la xisaabtamaan xisbigaan. Waa in ay taageeradooda u weeciyeen dhinac kale, waa in ay u muujiyaan xisbigaan in aysan la dhicin fadeexada been abuurka ah ee laga samaynayo Islaamka. Waa in loo muujiyaa xisbiga S in Muslimiinta Sweden aysan aqbali karin in been laga abuurto shaqsiyaadka Muslimiinta ah si looga saaro masraxa siyaasada.
Waa in loo cadeeyaa in Muslimiintu ay waxkasta ka dooranayaan Islaamka iyo amarka Allah.
waxay ila tahay in ayna marnaba naga raali noqonayn oo quraankeena ayaa noo sheegay in yahuud iya nasaara ayna marnaba naga raali noqonayn ilaa siday rabaan aan yeelno, marka ogaada taas xisbigaana yaan loo codayn ee Miljö ha loo codeeyo canaan ahaan inkastoo ay isku fikir yihiin hadana anaga somali ahaan xisbigaas wax weyn ayow noo galay dhanka fududeynta reera.
Waa maqaal fiican oo baraarujinaya dadka Muslimiintaa ee u codeeya xisbiga S si ay ula xisaabtamaan.
Asc dhaman Asxaabta jimcaale aan ku saxo mustafa maahan gudoomiyahay muslimiinta ee waa gudoomiyahay dhalinyara islamka mahadsanidiin